Saynisyahano Ruush ah ayaa isku dayaaya inay daba galaan baaxadda hal
Saynisyahano Ruush ah ayaa isku dayaaya Muqdisho
Other News GaloolPost
15:50 20 March 2021
Danmark waxay soo warisay laba kiis oo Dhiig xinjirow halis ah, oo ay ku jirto hal dhimasho, ka dib Marke qaateen talaalka AstraZeneca
Danmark ayaa Sabtidii sheegtay in hal qof uu dhintey mid kalena si xun ugu xanuunsaday xinjirowga dhiigga iyo dhiig-baxa maskaxda ka dib markii la siiyey tallaalka AstraZeneca COVID-19.
Labaduba oo ka tirsan shaqaalaha isbitaalka, ayaa labadoodaba la siiyay tallaalka AstraZeneca 14 maalmood ka hor intesan la xanuunsan, ayay tiri hay'adda maamusha isbitaallada dadweynaha ee Kobanheegan.
Hay'adda dawooyinka deenishka ayaa xaqiijisay inay heshay laba "warbixin halis ah", iyada oo aan ka bixin faahfaahin dheeraad ah.
Danmark, oo joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca bishii Maarso 11, waxay ka mid ahayd in ka badan toban waddan oo si ku-meelgaar ah u Hakiyeen isticmaalka tallaalka ka dib markii ay soo baxeen warbixinno ku saabsan kiisaska dhiiga maskaxda ee dhifka.
Qaar ka mid ah waddamada oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Faransiiska ayaa toddobaadkan waxay ka noqdeen go’aankoodii ahaa inay joojiyaan isticmaalka tallaalka ka dib markii hay'adda ilaalada dawooyinka ee Midowga Yurub baaritaan ey ku sameesay warbixinnada ku saabsan xinjirowga dhiigga , oo sheegtay Khamiistii inay weli ku qanacsan tahay waxtarka tallaalku inuu ka badan yahay halistiisa.
Danmark - oo ay weheliyaan Sweden iyo Norway - ayaa sheegay jimcihii inay u baahan yihiin waqti dheeri ah si ay u go'aansadaan inay isticmaalayaan tallaalka iyo in kale.
"Waxaan mudnaanta siineynaa warbixinada laga shakisan yahay waxyeelooyinka halista ah sida kuwaan oo aan si qoto dheer u baarno si aan u qiimeyno inuu jiro xiriir ey la leyihiin tallaalka," Tanja Erichsen, oo ah sii hayaha agaasimaha farmasiga ee wakaaladda dawooyinka deenishka, ayaa ku tiri qoraal ay soo dhigtay sabtiga.
Talaalka AstraZeneca oo soo saartay jaamacadda Oxford, ayaa sheegtay in dib-u-eegis lagu sameeyay in ka badan 17 milyan oo qof oo lagu tallaalay Midowga Yurub iyo Ingiriiska aan laga helin wax caddeyn ah oo muujinaya halista sii kordheysa ee xinjirowga dhiigga.